Moments leh saaxiibo 63
Maaha mabda'a fiqi ahaaneed ee caqabaddeenna ku saabsan dhulka oo ah karmicmaalmeed, oo leh shuruuda fiqi ahaaneed ee dhibaatadeena ah sida jahannamada cadaabta, in labadaba sheego in la aqbalo diinta rumaysadka oo kaliya; iyo, mid kale, mid wuxuu ku saabsan yahay mid wanaagsan sida kan kale si ay u soo saaraan wanaag wanaagga ah?
Labada caqiido waxay kujiraan isbarbar yaac, waana in lagu qaadaa caqiido kaliya inta maanka uu ku jiro xaalad aan macquul aheyn ama cunug. Caqiidooyinka ayaa la aqbalaa, si la mid ah alifbeetada iyo miiska isku dhufashada ayaa cunug loo qaataa - iimaanka.
Marka caqliga caqli galku baarto caqiidooyinka, waxay ogaataa in silica aduunku ku saleysan yahay sharciga iyo cadaalada oo lagu cadeeyay waaya aragnimada nolosha, iyo in caqiidada cadaabta ay tahay xukun aan kala sooc lahayn oo lagu dhisay siyaasada fiqi ahaaneed. Maskaxda ma heli karto sabab silica weligeed ah loogu helo cadaabta iyadoo aargudashada khaladaadka lagu sameeyo inta badan jaahilnimada hal nolol gaaban oo dhulka ah, gaar ahaan marka khaladaadka ay u muuqdaan in lagu qasbay badiyaa duruufaha iyo deegaanka, taas oo uusan keenin dhibbanaha.
Dib-u-noolaynta, iyo silica dhulka ku jira sida aargudashada karmic, markii loo dalbado in lagu sharraxo xaqiiqda nolosha, waxaa la helay inay u shaqeeyaan si waafaqsan sharciga, si la mid ah miiska isku-dhufashada iyo xisaabta. Silica waxaa loo arkaa natiijada ka soo dhalaalida ficil sharciga, mana ahan ciqaab, laakiin waaya aragnimada looga baahan yahay barashada in aysan sidaas u dhaqmin. Waxaa lagu kalsoonaan karaa sirdoonka in adduunyada iyo meesha ninku ku yaal ay yihiin natiijada sharciga halkii ay ka soo bixi lahaayeen natiijada aftareed.
Caqiidada fiqi ahaaneed ee cadaabta dhab ahaan looma dhihi karo inay ufiicantahay sida fiqi ahaan caqiidada aargoosiga karmic, in la soo saaro wanaag anshaxeed, waayo waligeed awood maskaxeed kuma dhalan karto cabsi cabsi leh. Caqiidada cadaabta waa in lagu qasbo wanaagga iyadoo laga baqanayo ciqaab. Taabadalkeeduna waxay abuurtaa fuleynimo anshaxeed waxayna soo jeedineysaa ficil aan xaq ahayn.
Caqiidada aargudashada karmic iyada oo loo marayo reincarnation, waxay ka caawisaa maanka inuu helo meeshiisii ​​iyo ka shaqeynta adduunka, oo wuxuu ku muujiyaa jidka toosan ee nolosha. Wanaagga akhlaaqda ayaa ah natiijada.
Ma jiraan wax caddayn ah oo ah cadaabta fiqi ahaaneed. Dareenka cadaaladdu wuu kacsan yahay kana hor tagaa cabsida ay leedahay maadaama maskaxdu ku korayso xoog iyo faham. Cadaynta karma waa dareenka cadaalada ee dhaxalka dadka. Awoodda aragtida iyo fahamka, waxay kuxirantahay rabitaankiisa ah inuu arko khaladkiisa iyo inuu saxo ficil uun.